कसरी बेसारले अनुहार एवं छालाको चमक बढाउँछ ? | सुदुरपश्चिम खबर
कसरी बेसारले अनुहार एवं छालाको चमक बढाउँछ ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १२, २०७८ 2
हुन त बेसार पूरा प्राकृतिक सामग्री हो । तर पनि यसलाई अनुहारमा लगाउनुका केही नोक्सानी समेत छन् । अनुहारमा बेसार लगाउँदा अनुहार पहेँलो हुने गर्छ । यो त सामान्य कुुरा हो । तर यदि कसैलाई बेसारसँग एलर्जी छ भने अनुहारमा बेसार लगाउनुपूर्व चिकित्सकसँग कुराकानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाहेक बेसारको खासै नोक्सानी नरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । अनलाइनखबर बाट सभार